Prasta Khabar-हेटौँडा क्याम्पसको बि.एड पहिलो बर्षलाई भलिवलको उपाधि
३१ चैत, हेटौंडा । हेटौँडा क्याम्पसको आयोजनामा भएको अन्तर क्याम्पस तहगत छात्र भलिबल प्रतियोगितामा बि.एड पहिलो बर्ष प्रथम भएको छ ।
नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा क्याम्पसले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा बि.एड पहिलो बर्षले कक्षा १२ मानविकी समूहलाई हराउँदै प्रथम भएको हो ।
प्रतियोगिताको मंगलबार भएको फाइनल खेलमा बि.एड. पहिलो बर्षले कक्षा १२ मानविकीलाई २५–१७, २५–२२, २२–२५ र २६–२४ को सेटमा पराजित गरेको हो । विभिन्न कक्षाका सात ओटा समूह सहभागी प्रतियोगितामा बि.एड. प्रथम विजयी भएको क्याम्पसका स्वास्थ्य तथा खेलकुद शिक्षक दिपेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा बि.एड. प्रथम वर्षका अजय माझी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् । प्रतियोगितामा प्रथम र द्वितिय हुने समूहलाई शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको अतिरिक्त क्रियाकलाप समितिका संयोजक मनोज पोखरेलले जानकारी दिए ।